China and Myanmar Seek Ways to Streamline Trade During the COVID-19 | Myanmar Business Today
HomeBusinessChina and Myanmar Seek Ways to Streamline Trade During the COVID-19
China and Myanmar Seek Ways to Streamline Trade During the COVID-19
Mr. Tan Shufu, the Economic Counselor at the Chinese Embassy to Myanmar, said that China, the biggest trade partner of Myanmar, will increase cooperation in cross border trade and building border trade posts through innovative cross-border freight transportation methods.
Myanmar and Chinese officials organized an online meeting on July 22 for easier cross border trade between the two countries as the COVID-19 pandemic has troubled trade flow.
Moreover, he also called for policy collaborations for stronger and better cross border trade and reassured to explore more trade opportunities between the two countries.
Officials from both sides discussed how to streamline cross border trade flow and resolve trade barriers during the COVID-19 pandemic as well as the current trading situation between the two countries.
They also discussed the implementation of the agreements during President Xi Jinping’s visit to Myanmar earlier this year as well as on matters such as streaming border trade, agricultural product inspections, expanding border trade routes and infrastructure, border trade development through recognizing payments both in Myanmar Kyats and Yuan.
Authorities still ban people going through the border gates between Myanmar and China except for some freight trucks. Myanmar exports around 15,000-20,000 bags of rice daily as well as onion and green gram while China exports textile, construction materials, electronics, and food to Myanmar.
Before the COVID-19, around thousand of trucks passed through the border gates between the two neighbors. But the number has decreased significantly.
When Chinese President Xi visited Myanmar on January 17-18 this year, the two countries signed 33 agreements in various sectors.
တရုတ်-မြန်မာ ဆန်းသစ်သောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းဖြင့် နယ်စပ်ဂိတ်တည်ဆောက်ရေး၊ ဂိတ်ဖြတ်သန်းမှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်မည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံရုံးမှ စီးပွားရေးသံမှူး Mr. Tan Shufu ကပြောသည်။
ထိုအပြင် တရုတ်မြန်မာ မူဝါဒချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူချင်းစိတ်ချင်းဆက်နွယ်စေပြီး နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု အရည်အသွေးမြင့်မား အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက် အားဖြည့်ပေးရန်လည်း Mr. Tan Shufuက အကြံပြုခဲ့သည်။
တရုတ် နိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်၊ တယ်ဟုန်ပြည်နယ်ခွဲနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့အကြား နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရေးဆိုင်ရာ အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
ကုန်သွယ်မှုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး အစီအမံများ ဆက်လက်တည်ရှိရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်အတူ လုပ်ငန်းချိတ်ဆက်မှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပြီး နှစ်ဖက်ကုန်သွယ်မှုအလားအလာများကို ထပ်ဆင့် ဖော်ထုတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Mr. Tan Shufu က ပြော သည်။
ထိုအပြင်တယ်ဟုန်ပြည်နယ်ခွဲ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ လက်ရှိတရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးပြောကြားပြီး COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်း နယ်စပ်ကုန်စည်ဖြတ်သန်းမှု နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းရေးအစီအမံများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြသည်။
သမ္မတ Mr. Xi Jinping ၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်၌ ဖြစ်ထွန်းခဲ့သည့် ရလဒ်ကောင်းများအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်း၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု အဆင်ပြေချောမွေ့စေခြင်း၊ လယ်ယာထွက်ကုန် ရောဂါပိုးမွှားစစ်ဆေးခြင်း၊ နယ်စပ်ဂိတ်လမ်းကြောင်းများ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်၊ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် တရုတ်၊ မြန်မာငွေကြေးဖြင့် တွက်ချက်ရှင်းလင်းခြင်းတို့ဖြင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု တည်ငြိမ်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊ စီးပွားကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နက်ရှိုင်းစေရေးတို့အတွက် လက်တွေ့ ထိရောက်သော အကြံပြုချက်များ တင်ပြခဲ့ပြီး ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
Previous articleEU Provides €37.625 Mln to Myanmar for Education Reform
Next articleSECM Eyes State-owned Enterprises to Become Players in Stock Market